နည်းနည်းလေး စဉ်းစားတတ်ရင်ပေါ့လေ….. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » နည်းနည်းလေး စဉ်းစားတတ်ရင်ပေါ့လေ…..
Posted by manawphyulay on Oct 24, 2010 in Creative Writing, Critic, Drama, Essays.., My Dear Diary |6comments
လူမှုဆက်ဆံရေးမှာ ကျင့်သုံးဖို့ စကားလုံးတစ်ခုကတော့ ကြီးသူုကို ရိုသေ၊ ရွယ်သူကိုလေးစား၊ ငယ်သူကို သနားတဲ့ ဟုတ်ပါတယ်နော်။ ဒီလိုပဲ နှိမ့်ချတတ်မှုဆိုတာ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံတဲ့အခါ ထိပ်တိုက်ဖြစ်အောင် ရင်မဆိုင်ဖို့လည်း လိုပါတယ်။ ဥပမာ ကိုယ့်လောက် စိတ်သဘောထား မပြည့်ဝတဲ့သူနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာ ဖြစ်နိုင်ရင် ရှောင်သွားဖို့၊ မရှောင်နိုင်ရင်လည်း ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးပဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် နှိမ့်ချပြီး လျှော့ပေးဖို့။ နောင် ဒီလိုလူမျိုးနဲ့ မတွေ့အောင် တတ်နိုင်သရွှေ့ ရှောင်ဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကားမောင်းတဲ့အခါ ကိုယ်က လမ်းမှန်အတိုင်း သွားနေပေမယ့် ကိုယ့်လမ်းကြောင်းထဲမှာပြီး ထိပ်တိုက်မောင်းလာတဲ့ကားကို ရှောင်ပေးဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မရှောင်ရင် တိုက်မိပြီး ဒဏ်ရာအနာတရဖြစ်ရမှာပေါ့ ဟုတ်ဘူးလားနော်။ အလားတူပဲ အရက်မူးနေတဲ့လု၊ ခေါင်းမကောင်းတဲ့လူနဲ့တွေ့ရင် သွားပြီး စကားများရန်ဖြစ်လို့ အလကားပါပဲ။ ကိုယ်က ဦးအောင်ရှောင်သွားမှ တော်မယ် ဒါဟာ ကြောက်စိတ်ရှိလို့ မဟုတ်ဘူးနော်။ဒီလိုပဲ လူမျိုးစုံနဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံတဲ့အခါမှာ အရက်မူးသမားလို၊၊ အရူးလို သိသိသာသာကြီး မူမမှန်တဲ့ လူတွေနဲ့ တွေ့ရမှာထက် ပညာဘယ်လောက်တတ်တတ် စိတ်ဓာတ်မပြည့်ဝတဲ့လူမျိုးနဲ့ တွေ့ရမှာက ပိုများပါတယ်။ အဲဒီမှာလည်း ပညာတတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ ကျောင်း၊ တက္ကသိုလ် အောင်တာကို အဓိက ပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အတွေ့အကြုံနဲ့ စိတ်ဓာတ်ပြည့်ဝမှု၊ အထက်စီးနဲ့ အမိန့်ပေးပေါင်းသင်း ဆက်ဆံတာမျိုး မလုပ်တာလို့ ကျွန်မ ယူဆမိပါတယ်။ ကိစ္စတစ်ရပ်ကို ကိုယ်က အပြည့်အစုံ မသိဘဲနဲ့ လက်အောက်ငယ်သားတွေကို ဆူပူကြိမ်းမောင်းပြီး ခိုင်းတာမျိုးကိုလည်း ကျွန်မ မကြာခဏ တွေ့မြင်ဖူးပါတယ်။ ဒါကြောင့် နေရာတိုင်းမှာ နှိမ့်ချပေါင်းသင်းလို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး လို့ ကျွန်မ တွေးကြည့်မိပါတယ်။ ဒီလိုဘဲ ဖြစ်လည်း မဖြစ်သင့်ပါဘူး။ ကိုယ်မှန်ကန်တယ်လို့ ယူဆရမိရင်လည်း ဒါကို လျှော့မပေးသင့်ပါဘူး။ တစ်ခါတစ်ရံ လူတွေဟာ ကိုယ်စီးတဲ့ မြင်း အထီးလား အမလား ခွဲခြားမသိသလိုပါပဲ စကားပြောတဲ့အခါမှာလည်း ပြောသင့်၊ မပြောသင့် မစဉ်းစားဘဲ လူတစ်ဖက်သားကို နင်ပဲငါဆ မပြောသင့် မပြောအပ်ပါဘူးလို့ ကျွန်မရဲ့ စိတ်အတွေးက လက်ခံယူဆနေမိပါတယ်။ ဒါဟာ ပညာတတ်တွေရဲ့ အလုပ် မဟုတ်ပါဘူး။ နည်းနည်းလေး စဉ်းစားတတ်ရင်ပေါ့လေ။
အခုတင်ပြထားတဲ့အချက်တွေက စာနဲ့ရေးပြရင်တော့ လိုက်နာရမှာအလွယ်လေးလို့ထင်ပေမယ်.
တကယ်တန်းပြဿနာနဲ့ကြုံတွေလာရင် သွေးအေးအေးနဲ့ ဒီလိုကျင့်သုံးနိုင်မယ်မထင်ပါဘူး။
လောကမှာ လူတစ်ရာမှာ 99ယောက်လောက်(ကျနော်အပါအ၀င်ပေါ့)ဘယ်လိုကောင်းအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့နည်းလမ်းတွေ
လုပ်သင့်တယ်ဆိုတာကို သိနေပေမယ့်လက်တွေ့ဘ၀မှာတော့ မကျင့်သုံးနိုင်ကြတာများပါတယ်.။
ချွင်းချက်အနေနဲ့ပြောရရင်တော့ သိသလောက်ကျင့်သုံးနိုင်တဲ့လိုက်နာနိုင်တဲ့လူတွေကိုတော့ လူတော်စာရင်းသွင်းလို့လေးစားပါတယ်၊
ကျနော်ကတော့ သိတော့လည်းသိနေသလိုနဲ့ လက်တွေ့မှာ အမှားတွေကို ကျူးလွန်မိတယ်ဆိုတာကိုတော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်သိနေတယ်ဗျာ။
ကျွန်တော်လို့ မရေးဘဲ ကျနော်လို့ တမင်အသံထွက်တဲ့အတိုင်းရေးတာပါ။
မှန်ရာကိုဝင်ခံတဲ့ ဦးပေါက်ကို ဆုချလိုက်ပါတယ်။ ဆုကိုတော့ စာတိုက်ကနေ ပါဆယ်ထုပ်ပြီး ပို့လိုက်လို့ စာပို့သမားလာပို့တာကို စောင့်ပါ။ ရောက်မယ်လို မျှော်လင့်ပါတယ်။
ကြီးသူုကို ရိုသေ၊ ရွယ်သူကိုလေးစား၊ ငယ်သူကို သနားတဲ့ ..
ဒီစာတွေဟာ ..အသက်အရွယ်ကို စံထားပြောသလိုဖြစ်နေတာမို့ ..ဘု၇ားဟောတရားတွေနဲ့လည်း မညီဖြစ်ပါတယ်..။
ကြီးသူကိုရိုသေဆိုတာမှာ ..အသက်ကိုကြီးတာသွားကြည့်တော့.. အကုန်ပေါက်ကရဖြစ်ကုန်ရော..။ ရိုသေဆိုတာမှာလည်း..ဘာကိုရိုသေတာလည်း ပြောစရာဖြစ်ပါတယ်.. ပြောသမျှခေါင်းညှိတ်ရမှာလား သူပြောတာ ရိုကျိုးလက်ခံမှာလား.. လား..လားတွေဖြစ်စေပါတယ်..။ ဦးနှောက်မကောင်းတဲ့လူရူးအဘိူးကြီးကို ရိုသေရမှာလားလည်းဖြစ်ပါတယ်.။ သင်္ကန်းစည်းထားတဲ့ .. ကကြီးခခွေးတောင်မေ၇းတတ်တဲ့.. ဘုန်းကြီးကို ကန်တော့ပြီး ပြောတာလက်အုပ်ချီနားထောင်ရမှာမျိုးလည်းဖြစ်စေပါတယ်..။ သင်္ကန်းစည်းပြီး ဈေးတန်းတွေထဲ ငွေလိုက်တောင်းနေတဲ့ ဘုန်းကြီးတွေကို ပြန်မပြောရဲဖြစ်စေပါတယ်..။
ရွယ်သူကိုလေးစားဆိုတာမှာ .. ဘာကိုလေးစားရမှာလည်း ပြောစ၇ာဖြစ်ပြန်ပါတယ်..။ တကယ်က ရွယ်သူမှမဟုတ်ပါဘူး..။ လူမှန်ရင်ကလေးဖြစ်ပစေ..ရက်စပက်ရှိပြီး လေးစားဆက်ဆံနိုင်ရင်ရပြီထင်ပါတယ်. ..
ငယ်သူကိုသနားလည်း … မှားတယ်ထင်ပါတယ်.။ သနားဆိုရာမှာ..ကိုယ်ကအပေါ်စီးယူသလိုဖြစ်နေပြန်ပါရော..။ ဘယ်သူက သနားခိုင်းလို့သနားနေရသလဲပြောစ၇ာဖြစ်ပါတယ်..။ ဘယ်သူ့ဘယ်သူကမှ ..ဘယ်သူ့ကိုမှ ..သနားပြစရာမလိုဘူးလို့..ထင်ပါတယ်..။
လူသားမှန်ရင်. .. ရက်စ်ပက်ရှိပါ။ တန်းတူ၊ ကိုယ်ချင်းစာ။ ညီမျှချစ်ကြည်ဆက်ဆံပါ။
အရွယ်သုံးပါးမရွေး..ကိုယ်လိုချင်တာရှိရင် တောင်းပါ။ မှားတယ်ထင်ရင်ပြန်ထောက်ပါ။ သူလိုချင်တာပေးနိုင်ရင်ပေးပါ။ မပေးနိုင်ရင် ညှိပါ။ တန်းတူထားဆွေးနွေးပါ။
ကိစ္စတစ်ရပ်ကို ကိုယ်က အပြည့်အစုံ မသိဘဲနဲ့ လက်အောက်ငယ်သားတွေကို ဆူပူကြိမ်းမောင်းပြီး ခိုင်းတာမျိုးကို etone လည်းတွေ့ဖူးပါတယ် ။ လက်အောက်ငယ်သားက ပြန်မပြောပဲ ငုံခံလေလေ ၊ အထက်လူကြီးက နိုင်ထက်စီးနင်းပြောလေလေပါပဲ ။ ဘေးက မြင်ရသူအဖို့ အလကားနေရင်း ဒေါသထွက်ရပါတယ် ။ အဲ့ဒီလိုအထက်လူကြီးအတွက် လက်အောက်ငယ်သားတိုင်းငုံခံနေရင် သူလည်း ဒီအတိုင်းဆက်ဆူပူဦးမှာပါပဲ ..။ လက်အောက်ငယ်သားထဲမှ ပြောရဲဆိုရဲတဲ့လူတယောက်လောက်များပါခဲ့ရင်တော့ အချက်နဲ့လက်နဲ့ပြန်ပြောနိုင်ခဲ့ရင် အထက်လူကြီး နည်းနည်း အသိတရားရလာနိုင်ပါတယ် ။ etone တို့တွေ့နေရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ သကာဖုံးတဲ့လူတွေများပါတယ် ။ မျက်နှာနဲ့အသံလေးက ချိုသလောက် အတွင်းစိတ်တွေကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ် ။ လိုချင်တာရှိရင် အဲ့ဒီလူနားကိုမျက်နှာလိုမျက်နှာရ ဘာပဲလုပ်ပေးရရဆိုတာတွေရှိပါတယ် ။ ဒီလိုလူတွေနဲ့တွေ့ရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို နှိမ့်ချပြီးဆက်ဆံဖို့ဆိုတာတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်ပါတယ် ။ etone ကတော့လူတိုင်းကို လူလို့ပဲဆက်ဆံပါတယ် ။ လူတယောက်ကို ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာ အထက်လူကြီးမို့မျက်နှာလုပ်တာလည်းမရှိဘူး ။ သန့်ရှင်းရေးသမားမို့နှိမ်ချဆက်ဆံတာလည်းမရှိဘူး ပြောသင့်တာပြောပြီး ပေးကမ်းစရာရှိရင်ပေးပါတယ် ။ တစ်ချို့သော ဟန်ဆောင်မျက်နှာဖုံးများတွေ့ရင်တော့ အလိုလိုနေရင်းနာရင်းအုပ်ချင်လာပါတယ်
လူဆိုတာက တစ်ယောက်တစ်မျိုးပဲလေ အဲတာဆိုတော့ ကိုယ့်အသိတရားအလိမ္မာလေးနဲ့ပဲရှောင်ရတော့မပေါ့